Vaovao - Nanatrika ny fihaonambe ara-toekarena tao amin'ny Hangtou Town 2015 i Shanghai Weyer
Ny tale jeneralin'ny Shanghai Weyer Electric Appliance Co, Ltd. dia nanatrika ny fihaonambe ara-toekarena Hangtou Town 2015, ary nanao kabary tamin'ity fihaonambe ity. Ny lahasa lehibe amin'ity fivoriana ity dia ny fampiharana tanteraka ny fihaonamben'ny asa toekarena afovoany, ny fampiharana feno ny fanahin'ny Fivoriana Folo an'ny Komity fivoriana fahafito ary ny fivoriana telo an'ny Komitim-paritra ny fivoriana fitenenana fito, famerenana ny taona 2014 Hangtou fahombiazana ara-toekarena tao an-tanàna, fanaparitahana lasibatra ary iraka tamin'ny 2015 toekarena, hampiroboroboana bebe kokoa ny làlan'ny fampandrosoana ara-toekarena maharitra sy salama Hangtou.
Nandritra ny fihaonambe, ny filoha Chen dia namintina ny zava-bitan'i Weyer nanomboka tamin'ny taona 1999. Miaraka amin'ny China Strategy, fanavaozana ny teknolojia, ny fangatahana marketing, Weyer mizara fahombiazana betsaka amin'ny orinasa amin'ireo mpanatrika. Nidera ny tompon'andraikitra Weyer ho an'ny fiarahamonina ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta, maneho ny fisaorana ny filoha Chen.
Ho fankatoavana ny rohy, Shanghai Weyer, amin'ny maha boaty fanosehana azy, dia nanao fanomezana lehibe tamin'ny fampandrosoana ireo orinasa ary nanome vola mavitrika ho an'ny fiantrana. Amin'ny anaran'ny orinasa dia nahazo ny mari-pankasitrahana fampandrosoana ara-toekarena 2014 i Weyer, "kintan'ny fiantrana" ary anaram-boninahitra hafa.